सलमान खान आफैँले बोलाएर ‘राधे’ मा डेब्यू गराएका ‘लोता’ को हुन् ? – Kavrepati
एकवर्ष अगाडीसम्म १५ हजारमा नोकरी गर्ने यी ज्ञानेन्द्र शाहीसँग ९० लाखको गाडी कहाँबाट आयो ? यस्तो छ वास्तविकता
कोरिया रोजगारी बन्द !
काठमाडौं बासीहरुको लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर ! पाउने भए २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट: अवस्य पढ्नुहोस
सेजलको बेडरुममा देखियो हेर्ने नसकिने दृश्य, यौ नच जन्य सामान, सिरिन्ज र यस्ता दागहरु देखिए (भिडियो सहित)
जात थाहा पाएपछि कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध रूपाले प्रहरीमा दिइन् जाहेरी
सिकर राजाकी छोरी हिमानीः सिंहबाट कसरी बनिन् शाह ? [भिडियो]
एक पत्रकार जसले आफ्नै घरखेत डुबेको स्थलगत रिपोर्टिङ गरे
Home / मनोरंजन / सलमान खान आफैँले बोलाएर ‘राधे’ मा डेब्यू गराएका ‘लोता’ को हुन् ?
admin2weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 557 Views
मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार सुरबिर पण्डित दाह्रीलाई के भयो ?
सञ्जयकी श्रीमतीले भावुक बन्दै लेखिन् म सञ्जूका फ्यानहरुसँग उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना माग्छु
काठमाडौं । मे १३ इदको दिन रिलिज भएको बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको चलचित्र ‘राधेः योर मोस्ट वान्टेड भाइ’ ले झुर समिक्षा र प्रतिक्रियाहरू पायो । रेटिङको हिसाबमा पनि सलमानको चलचित्रले अहिलेसम्मकै कम रेटिङ पाएको चलचित्रको ‘रेकर्ड’ बनायो ।
यद्यपि सलमानको तारिफ र प्रशसकले भने चलचित्र हेरेर मज्जा लिए । यस्तै अहिले चलचित्रमा रणदीप हुड्डासँगै उनको दाया हात बनेर सधैँ उनको वरिपरि रहने एक व्यक्तिको चर्चा चुलिएको छ । बलिष्ठ पाखुरा, ठूलो छाति भएका बडेमानका ती व्यक्ति लोता उर्फ सांगे शेल्ट्रिम हुन् । उनी पूर्व भुटानी सेना अधिकारी र शाही अंगरक्षक हुन् ।
अभिनेता सलमान खानसँग डेब्यु गर्ने इच्छा हरेक न्यु कमरको हुन्छ । कतिले कैयौँ प्रयास पछि बल्ल यो मौका पाउछन् भने कतिले अझै पाउँदैनन् । तर भुटानी नागरिक शेल्ट्रिमलाई ‘राधे’ मा सलमान आफैँले रोल दिएका हुन् । सलमान आफैँले राधे टिमलाई शेल्ट्रिमलाई बोलाउन लगाएका हुन् ।
बलिउडका ‘भाइजान’सँग बलिउड इन्डस्ट्रीमा डेब्यु गर्ने मौका पाएकोमा सांगे पनि निकै खुसी र आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । भलै चलचित्रले राम्रो प्रतिक्रिया पाएन सांगेलाई त्यसले केही फरक परेको छैन् । त्यसैले उनले राधेलाई ट्रोल गर्नेहरूलाई जवाफ फर्काउँदै भनेको थिए, “एकदिनमा ४.२ मिलियन भ्युज पाइरहेकोमा १–२ लाख ट्रोल केही फरक पर्दैन ।”
एक फ्यानको रूपमा सलमानसँगको भेटले जुराएको मौका-सांगेले बलिउडमा यति ठूलो मौका सलमानसँगको एक भेटले जुराएको हो । यसका साथै उनको बलिष्ठ पाखुरा र फिट बडी र फिट्नेसको लगावकै कारण उनले राधेमा ‘लोता’ खलनायकको भूमिका पाएका हुनभन्दा फरक नपर्ला ।
सलमान आफैँपनि ५० कटिसक्दा पनि फिट्नेसमा उत्तिकै लगाव राख्छन् । सांगेको पनि यो प्रतिको लगावले सलमानको रोजाइमा सांगे परेको हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फिटनेस प्रतियोगीतामा आफ्नो देशलाई चिनाउने हुटहुटीले सांगेले सन् २०१३ मा सेनाबाट स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लिएका थिए ।
फिटनेस प्रतियोगीताहरूबाट धेरै पुरस्कारहरू जितिसकेपछि उनले आफ्नो गृहनगरमा जिम सुरु गर्ने निर्णय लिए र सँगै अभिनय पनि सुरु गरे । यही क्रममा उनको कुराकानी बलिउड फिल्म निर्माता हैदर खानसँग भयो । फिल्म निर्माता खानले सांगेलाई ओटीटी फिल्मका लागि मुम्बई बोलाए र सांगे आएपनि ।
“एकदिन उहाँ (हैदर)ले मलाई उहाँ सलमान खानको डबंग (दबंग ३) को सेटमा सलमान खानलाई भेट्न जान लागेको र मलाई पनि जान मन भए जाम भन्नु भयो,” सांगेले विगत सम्झिए ।त्यसपछि जे भयो सांगेले सपनामा पनि कल्पना गरेका थिएनन् ।भुटानका पनि बिगस्टार मानिने सलमानलाई प्रत्यक्ष भेट्दा उनी त्यसलाई एउटा जादुयी क्षणभन्दा कम सम्झदैनन् ।
त्यस्तै ५०० भन्दा बढी मानिसहरू सेटमा बसेर काम गरिररहेको देख्दा सांगे बलिउडप्रति अझै आकर्षित भए ।सलमान नाइट छायाङ्कनमा थिए तर पनि सलमानले सांगेसँग भेट्न समय निकाले । सांगेकाअनुसार सलमान र उनीबीच करिब एक घण्टा लामो गफ भयो र अझ सलमानले उनलाई डिनरको लागि पनि अफर गरेका थिए ।
सांगेकाअनुसार उनीहरूबीच फिटनेसका विषयमा मात्र कुराकानी भयो । “उहाँले मसँग बसेर एक घण्टा भन्दा धेरैबेर गफ गर्नुभयो । उहाँको सिनका लागि बोलाएपछि मात्रै उहाँ सेटमा जानुभयो । एक अपरिचित व्यक्तिलाई यति धेरै माया र सम्मान दिनु भनेको यो उहाँको उदारता थियो,” सांगेले भने ।
छुट्टिने बेला सांगेले एक फ्यानको रूपमा सलमानसँग फोटोका लागि आग्रह गरे र त्यसको केही क्षणमै उनकाअनुसार विहानको ३ बजे नै उनले उक्त फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गरे । जसपश्चात् उनको भुटानमा चर्चा चल्न थाल्यो र उनको फलोअर्स पनि रातारात बढ्न थाले ।
सलमानसँगको भेटको दुई महिनापछि नै निर्माता हैदर खानले सांगेलाई फेरि फोन गरेर भेट्न मुम्बई बोलाए । तर यो पटक हैदरले आफ्नो लागि नभई सलमानले उनलाई चलचित्रका लागि दिएको अफरका कारण बोलाएका थिए । त्यसको तुरुन्तै आफ्नो ब्याग बोकेर सांगे भुटानबाट मुम्बई आएर सलमान र राधेको टिमसँग जोडिए ।
सलमानसँगको सम्बन्ध यति नजिक र गाढा भएपनि सांगेले कहिले पनि आफ्नो दायरा पार गर्ने कोसिस गरेका छैनन र उनी सलमानलाई उत्तिकै सम्मान गर्छन् । सलमानप्रतिको सम्मानलाई सांगे यसरी वर्णन गर्छन्, “म उहाँलाई कहिले पनि साथी र सहकर्मीको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दिन ।
उहाँप्रति मबाट धेरै सम्मान छ । सेनामा सिकेको कुरालाई मध्यनजरगर्दै उनी सलमानलाई ‘सलमान सर’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । सांगेले राधेको छायांकन सँगका धेरै फोटोहरू आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा सेयर गरेका छन् । राधेपछि त उनको देश भुटानमा सांगेको झनै चर्चा चुलिएको उनले महसुस गरेका छन् । एजेन्सीहरूको सहयोगमा
Previous निषेधाज्ञामा गुडिरहेको दुई जना सवार स्कुटर शंका लागेर जाच गर्दा… प्रहरी नै तिन छक
Next विवेकशील साझाका नेता उज्वल थापाको निधन
कोच प्रमोद डलरमा बिकेका हुन त ? मेलिनालाई छोडेर किरणलाई रोज्नुको रहस्य यस्तो छ ।।
नेपालकै नम्बर १ गायन रियालिटी शो ‘दि भ्वाइस अफ नेपालको सिजन ३ जारी छ । …